China Coating Services စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Donghua
DHUA သည် thermoplastic စာရွက်များအတွက်အပေါ်ယံပိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများနှင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများဖြင့် acrylic သို့မဟုတ်အခြားပလတ်စတစ်ပြားများပေါ်တွင်ပရီမီယံပွန်းပဲ့မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ မြူဆန့်ခြင်းနှင့်မှန်မျက်နှာပြင်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ သင်၏ပလတ်စတစ်အခင်းများမှကာကွယ်မှု၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ရည်မှန်းချက်သည်။
Coating Services တွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည် -
DHUA သည်မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက် thermoplastic စာရွက်များနှင့် optical coating ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအားဖြင့် thermoplastic စာရွက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ယံပိုင်းန်ဆောင်မှုကိုဖော်ပြရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများနှင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများဖြင့် acrylic သို့မဟုတ်အခြားပလတ်စတစ်ပြားများပေါ်တွင်ပရီမီယံပွန်းပဲ့မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ မြူဆန့်ခြင်းနှင့်မှန်မျက်နှာပြင်များကိုထုတ်လုပ်သည်။
သင်၏ပလတ်စတစ်အခင်းများမှကာကွယ်မှု၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ရည်မှန်းချက်သည်။ သင်၏လုပ်ဆောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ အပေါ်ယံပိုင်းကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မှန်သောအသုံးချခြင်းနည်းပညာနှင့်ပလပ်စတစ်အခင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးကုတ်အင်္ကျီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖန်တီးရန်ကောင်းမွန်သောလျှောက်လွှာနည်းပညာနှင့်သုတ်သင်ခြင်းလုပ်ငန်းများပေါင်းစပ်သည်။
AR - ဒဏ်ခံခြစ်ရာခြစ်ရာ
ခဲယဉ်းသောကုတ်အင်္ကျီများသို့မဟုတ်ခြစ်ရာမှုမရှိသည့်အပေါ်ယံလွှာကိုပိုမိုထိရောက်စွာပွန်းပဲ့မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဖုံးအုပ်မှုဟုခေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ AR Scratch Resistant Coating သည် DHUA acrylic သို့မဟုတ်အခြားပလပ်စတစ်ပြားများနှင့်ဆက်စပ်သောထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင်ပွန်းစားခြင်းနှင့်ဓာတုခံနိုင်ရည်ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပေးပြီးထုတ်ကုန်၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့သည်။
ခြစ်ရာမှကာကွယ်မှုသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည့်အခါပွန်းပဲ့နိုင်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် acrylic သို့မဟုတ်အခြားပလပ်စတစ်ပြားသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ တစ်ဖက် (သို့) နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဖုံးအုပ်မှုရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်ပွန်းပဲ့ခြင်း၊ အစွန်းအထင်းများနှင့်အရည်ပျော်ပစ္စည်းခံနိုင်ရည်ရှိရန်လိုအပ်သည့်အသုံးချမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
DHUA သည်ကြည်လင်သောကြည်လင်သောအပေါ်ယံလွှာဖြစ်ပြီးမြဲမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးခံနိုင်ရည်ရှိပြီး Polycarbonate sheet, polycarbonate film တို့အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဆေးကြောနိုင်သည့်အပြင်ရေဖြင့်ဆေးကြောနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံမှုမျက်မှန်၊ မျက်နှာဖုံးများနှင့်မျက်နှာအကာအရံများ၊ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းကိရိယာများစသည့် visor inရိယာတွင်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
အလူမီနီယမ်၏ပါးလွှာသောမျက်နှာပြင်ကိုအလွှာတွင်သုံးပြီးရှင်းလင်းသောအကာအကွယ်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်အရည်အသွေးမြင့်ရောင်ပြန်မျက်နှာပြင်ကိုဖန်တီးရန်မဖွင့်ဖြစ်စေ, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးမှန်အဖြစ်လူသိများနှစ် ဦး - လမ်းမြင်ကွင်းအဘို့အ Semi- ပွင့်လင်း။ ပုံမှန်အားဖြင့် coated အလွှာ acrylic ဖြစ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သော PETG, Polycarbonate နှင့် Polystyrene စာရွက်အဖြစ်အခြားပလပ်စတစ်အလွှာသည်ဤတူညီသောသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးရန် coated နိုင်ပါတယ်။
အရည်အသွေးမြင့်ပလတ်စတစ်များ, စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှု. Quote တောင်းခံပါ ဒီနေ့! သင်၏စီမံကိန်းအတွက်သင်လိုအပ်သည့်အရာများကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်နှင့်ဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။